Indawo yokuhlala yaseMapua Studio ekumgangatho ophezulu
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguKathy
Nceda ujonge imithetho yeNdlu malunga noGonyo lwe-Covid, ukuBekwa wedwa okanye iimfuno zokuBekwa wedwa.
Umlilo weenkuni, ndiyawuthanda kwaye ulungele umphefumlo.
Isitudiyo sesangoku kodwa sisekhaya, Sifakwe kakuhle, sikumgangatho oPhezulu, senziwe ngothando.
Ibhedi ye-Queen enamashiti e-ayini yomqhaphu.
Ishawa enethayile entle kakhulu, ikhitshi elixhotyiswe kakuhle, umgangatho onegadi yabucala ebiyelweyo.
Udidi, umphefumlo, indawo engcwele
Isitudiyo sikwisitrato esithe cwaka kwipeninsula encinci kwichweba laseWaimea kwaye yimizuzu nje embalwa uhamba uye kwiivenkile zokutyela kunye neevenkile ezithandekayo eWharf.
Ngexesha lasebusika, iSitudiyo sineWoodfire, kunye nokukugcina ushushu njenge-toast, idala i-ambience entle epholileyo kwaye ilungele umphefumlo.
4.97 · Izimvo eziyi-237
I-Mapua Studio ikwi-peninsula encinci kwi-Waimea Estuary kodwa yimizuzu nje embalwa uhamba uye e-Wharf apho kukho iindawo zokutyela, iivenkile zobugcisa becafe kunye neevenkile ezithandekayo, intlanzi kunye nevenkile ye-chip ngokunjalo, ivenkile ethengisa utywala ehlala ihlala. umculo ehlotyeni.
IMapua ikwindawo entle, esembindini wayo yonke ingingqi yeTasman ekufuneka ibonelele, iiwineries, iigalari zobugcisa, iilwandle kunye neepaki zelizwe.
Qubha okanye ukutshona kwelanga. Ekupheleni kwesitrato sethu, qubha kwindawo epholileyo okanye kwindawo ezolileyo ukuze ubone imini ngokutshona kwelanga okuqaqambileyo.
I-Great Cycle Taste Trail. IMapua isendleleni kwaye kukho isikhephe esithwala wena kunye nebhayisekile yakho ukuwela iRabbit Island ukuya eNelson okanye ungakhwela ibhayisekile uye eKaiteriteri kwelinye icala.
Ipaki yeSizwe yaseAbel Tasman yimizuzu engama-40 kude namahlathi ayo anomtsalane kunye nesanti yegolide, indlela entle yokuchitha usuku nokuba uhamba ngekayaking okanye uhambe.
Isikhululo seenqwelomoya saseNelson 25: imiz
I-Motueka kunye ne-Richmond: i-15 imiz
I-Abel Tasman National Park: Imizuzu engama-40
I-Kahurangi National Park: 50mins
Umbuki zindwendwe ngu- Kathy
Ndihlala kwisiza kwaye ndiza kuba lapha ukuze ndinamkele. Ndiyavuya ukukunceda ngolwazi okanye izalathiso ngexesha lokuhlala kwakho kwaye ufumaneke kakhulu okanye kancinci njengoko unqwenela.